Lammaa Magarsaa:A Very Interesting Analysis of the so Called OPDO Supporters of Diaspora!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLammaa Magarsaa:A Very Interesting Analysis of the so Called OPDO Supporters of Diaspora!!
Lammaa Magarsaa : A Very Interesting Analysis of the so Called OPDO Supporters of Diaspora!!
Jibbaaf osoo hin taane tarsiimoof jenne
OPDOn Lammaa Magarsaa Mummicha Ministeeraaf akka qaadhimtu dubbachuun keenya warra gariin akka qondaalota biraa xiqqeessinee ilaallutti waan fudhatan fakkaata. Akkas miti. Namoonni maqaa dhayaman hundi jabinaafi laafina qabu. Laafinaafi jabina isaanii hoggansa yeroon tun gaafattuun madaalleeti. Ulaagaaleen hoggansa cehuumsaas, fudhatama, dhageettii, dandeettii hojiin muldhate, obsa, naamusa, muuxannoo kkf dha. Ulaagaalee kana hunda walitti daballee yeroo ilaallu qabxii ol’aanaa kan argatu Lammaandha. Kana jechuun jarri maqaan dhadhayama jiru sadan haamdha jechuu miti. Hoggansa ammatti yeroon barbaadduuf Lammaatu wayya jenne malee. Fakkeenyaaf
1) Abbaan Duulaa OPDO jijjiruu keessatti shoora guddaa taphate. Bara 2005 nama barateefi namoota sabbonummaa qabaniif balabala banuutu hogganoota amma agarru kana dhaabatti make, warra dura makameefis humna hore. Erga aangoo hoggansa OPDO irraa bu’es warra duubatti harkiftan dhiibuun, joollee jijjirama barbaaddu ( #TeamLemma) aangotti akka dhuftuufi ergasiis ija hamtuu jalaa harka irra qabaa ture. Kanaaf galata qaba. Garuu Gadaan isaa dabruu qofa osoo hin taane ulaagaa hoggansa ceehuumsaatiif Lammaatu irra wayya. Abbaan Duulaa akka hoggana gameessatti lammaafi hogganoota jalaa dhufaniif gorsaafi gaaddisa ta’ee itti fufuu wayya.
2) Dr Warqinaa Gabayyoo dandeettiifi naamusa hojii akka qabu beekama. Erga kara ministeera haajaa alaa dhufee as ololli farra Oromoo waajjirri sun Faranjootatti afuufu hirdhatee jira. Ta’us hoggansa yeroo ceehumsaa kanaa ta’uu hin danda’u. Bakkuma amma jiruu Ministeerri Alaa akka dantaa biyyaafi saboota hundaa fayyadutti jijjiruu itti fufuu wayya.
3) Dr Abiyyi Ahmad yeroo gabaabatti gara hogansa siyaasaa dhufee dandeettii isaa agarsiisaa jiruudha. Namoonni isa beekan duguggurruu duugdaa #TeamLemma akka ta’e himu. Qorannoon keenyas ni mirkaneessa. Nama gara fuulduraas sabaafi biyya teenyaaf waan guddaa hojjachuu danda’uudha. Ammatti garuu hoggansa yeroo cehuumsaa kanaaf hin ta’u. Akka nama 2ffatti dugugurruu duugdaa Lammaa ta’ee itti fufuutu fuulduree isaatifis ta’ee qabsoo tanaatiif faaydaa qaba. Guyyaan isaatis ni dhufa! Kanaafuu ammatti bakkuma amma jiru irraa hojii haaraomsaa Oromiyaa keessatti eegalame itti fufsiisuu qaba. Kana gochuun isaa hojii Lammaan sadarkaa federaalaatti hojjatuuf humna guddaa ta’a.
Kanaafuu hoggannoonni sadeeni kuniin moggaan mumul’achuu osoo hin taane Lammaa duubaan hiriiruun isaafi ummataafis humna akka ta’an gorsina. Kun ta’uu baannaan dhaaba isaaniitifi mootummaan sunis kaardii takkitti qaban tan lammaa jedhamu waan gubaniif umriin isaanii dhumatuu ishiiti.
“Hiriirrii waamame tokkoyyu hin jiru. shiira diinummaa kaa qeerroon ciimsee balaalefata!
Oromiyaa keessa guyyaa borii irraa eegalee hiriirrii mormii jiraa jechuun wayyaaneen ololaa jirti. Kun kayyoon godhamaaf jiru ifa. Shiira Oromiyaa tasgabbii dhorkun, BMNO bittiinsun LAMMAA MAGARSAA mummiicha ministarummaa irraa hanqisun shiira xaxamaa jiru. Kanaaf Qeerroon dammaqee tasgabbiin sochoowun, toftaawwan diinnii nurrattii aggaammata tarsimoon fashalsutu barbaachiisa. Kanaaf Qeerroon Oromoo taataan fi lallabbii shiira diina kana ciimsee balaaleeffata.”
Marsariitiin Aiga Forum jedhamu miidiyaa interneetii Wayyaanotaa isa guddaa dha. Marsariitiin kun gidduu kana Qeerroo fi Obbo Lammaa Magarsaa irratti duula guddaa banee jira. Jala bultii labsii yeroo muddamaa irraa qabee ”Qeerroon Alshabaab waan taheef qoratamuu qaba, akka hin qoratamne ammoo Lammaa Magarsaatu gufuu nutti tahe” yaada jedhu bal’inaan dabarsaa jira. Lammaa Magarsaa muummicha ministeeraa tahuu hin danda’u jedhanii maqa isaa xureessuuf itti duulaa jiru. Diinni isaanii guddaan yero ammaa Qeerroo fi Lammaa tahuu dhoksaa tokko malee ibsataa jiru. Labsii Yeroo Muddamaa kanaanis Qeerroo irratti duuluu fi Lammaa Magarsaas filannoon ala godhanii hawwii Oromoon ifatti bahuuf qabu ajjeesuuf marxifachuu isaanii argaa jirra.
Nuti ammoo akka Oromootti Lammaa jarri jibbu kana barcuma sana irraan geenyu malee jennee ka’uu qabna. Osoma duraan Lammaa hin deeggarru tahee illee xiiqii TPLFiif jecha Lammaan deeggaramuuf haqa qaba. Warri OPDO keessatti Lammaa dhiisanii namoota biraa barcuma sanaaf kaadhimachuuf shiraa jiranis kana beekuu qabu. Kaayyoon Lammaa Magarsaa barcuma MM irraa hanqisuu kaayyoo TPLF Wayyaaneeti. Kaayyoo kana beekaas tahee fayyaalummaan fudhatee kan faallaa Lammaa dhaabate hundi diina Oromoo fi diina ummata ifa bilisummaa fi dimokraasii arguu barbaaduuti.
Namoonni gariin Lammaan yoo MM tahes wanti dhufu hin jiru jedhu. TPLF ammoo yoo Lammaan aangoo sanatti dhufe badiisa keenya jettee sana hanqisuuf irratti duulaa jirti .Sababni isaas, akka Lammaan cehumsa gara dimokraasii fi bilisummaatti godhamu hogganuuf EPRDF keessaa eenyuyyuu caalaa murataa, sabaaf amanamaa fi gahummaa qabu waan beekaniif. Kanaafuu sabni keenya hundi Lammaa waliin haa dhaabannu!
Ethiopia : ዶ/ር አብይ አህመድ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስተር ሊሆኑ ከጫፍ ደርሰዋል:: ውሳኔውም ከሶት ቀን በኃላ ይፈ ይሆናል:: ኦህዴድም ለምርጫ ዶ/ር አብይን ሙሉ በሙሉ መምረጡና ለምርጫ ማቅረቡን የደረሰኝ መረጃ ያመለክታል:: ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስተርነትን ማእረግ ከሶስት ቀን በኃላ ዶ/ር አብይ እንደሚቀበሉና ቃለማህላ እንደሚያደርጉ የደረሰን መረጃ ያሳያል:: ዶ/ር አብይ ለውጥ ያመጣሉ ከሚባሉት የኦህዴድ ሰዎች ውስጥ አንዱ መሆናቸውም ይታወቃል:: ዶ/ር አብይ ከተመረጡ የወያነን መዋቅር በጣጥሰው ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ ሰላምን ፍቅርንና አንድነትን እንደሚያመጡ ጥርጥር የለኝም:: ይህ ማለት ግን በአንዴ የሚሆን አደለምና ዶ/ር አብይ ከተመረጠ ግዜ ልንሰጠው ይገባል:: ኢትዮጵያዊነት ይለምልም!
AS’s @tselemma joined @VOAVinceMakori before the SoE was declared & expressed her reservations about its effectiveness; discussed concessions the ruling EPRDF should make.She also briefly discussed one of the legacies of PM Hailemariam as a pacifier. Video https://t.co/pwaImrAsau pic.twitter.com/9mRfonFCR5
— Addis Standard (@addisstandard) February 17, 2018